NUSOJ oo cambaareeysay falka lagu dhaawacay Wariye Farxaan Suleymaan – Radio Muqdisho
Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa cambaareeyay fal isku day dil ah oo la doonayay in lagu qaarajiyo Wariye Farxaan Suleymaan Daahir oo ka tirsan Sawir qaadayaasha Radio Muqdisho, xilli uu ku sugnaa aga gaarka Isgoyska KPP ee degmada Hodan.
War-saxaafadeed uu soo saaray NUSOJ ayaa lagu sheegay inay aad uga xunyihiin falka lagu dhaawacay Wariye Farxaan Suleymaan Daahir, isla markaana ay cambaareynayaan dadkii falkaasi ka dambeeyay, oo ay dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno.
“Shan xabadood ayay ku dhufteen wariyaha, taasi oo labo ka mid ah ay feeraha ka haleeshay, midna ay gacanta kaga dhacday oo sababtay in gacanta bidix ay jabto, waxaa kaloo jirta mid madaxa ka sartay” ayuu yiri Xuseen Aadan Ibraahim oo la hadlay NUSOJ.
Tifaftiraha Radio Muqdisho Ismaaciil Mukhtaar Cumar oo isna la hadlay NUSOJ ayaa sheegay in Wariye Farxaan ay dhagar qabayaashu ku dhufteen shan xababood, isla markaana ay meyd ahaan uga tegeen, laakiin uu Alle ka badbaadiyay dhagarta ay la rabeen kuwii falka u geystay Wariye Farxaan Suleymaan Daahir “Maaskaro”.
Xoghayaha Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ Maxamed Ibraahim Bakistan ayaa si kulul u cambaareeyay falka lagu dhaawacay sawir qaade Farxaan, isagoo ka codsaday dowladda inay sameyso baaritaanno, ayna cadaaladda horkeenaan kuwii falkaasi ka dambeeyay.